November 2021 - Achawlaymyar
လိုလေသေးမရှိဘဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်ဖြင့်မွေးဖွားလာခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမွေးကင်းစကလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးရဲ့လက်ရှိဘဝ
November 30, 2021 by Achawlaymyar
လွန်ခဲ့သည့်သုံးနှစ်ကျော်လောက်က ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိနေတဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်တစ်ဦး၏ဓာတ်ပုံများဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ကလေးငယ်ဟာ မွေးဖွားလာတာမကြာသေးပေမဲ့လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှပဆုံးသောမွေးကင်းစကလေးငယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုကော အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကောင်လေးရဲ့အသွင်အပြင်က ကျွန်တော်တို့ကို အံ့အားသင့်စေမယ်လို့ထင်လားဗျာ။ အမှန်တော့ ကလေးငယ်အားလုံးနီးပါးက ၎င်းတို့ရဲ့ရုပ်သွင်ပြင်ထင်ရှားပေါ်လွင်လာဖို့ လအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရပေမဲ့ အဆိုပါထိုင်းကလေးငယ် Arsya ကတော့ အနက်ရောင်မျက်လုံးကြီးများ၊ပန်းရောင်နှုတ်ခမ်း၊ ပန်းဆီရောင်ပါးပြင်၊ နှာခေါင်းတံသွယ်သွယ်နှင့် နူးညံ့ပုံကျတဲ့မျက်ခုံးနှစ်ဖက်တို့ဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မှာ “နို့စို့အရွယ်မှလှပခြင်း” ဟူသော စကားပုံအတွက် သက်သေခံချက်တစ်ခုလိုပါဘဲ။ . ကလေးငယ်အားမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ Anton Tanjung ဟာ Arsya ရဲ့မွေးကင်းစဓာတ်ပုံများကိုပထမဆုံးတင်ပေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် လူတိုင်းက ” like father ,like son ” ဆိုတဲ့စကားစုကိုအသုံးပြုပြီး ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဆရာဝန်က ကလေးရဲ့ဖခင်လို့ အစမှာ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ . သို့ပေမဲ့လည်း Arsya ရဲ့တကယ့်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကို … Read more
ခေါင်းကိုက်၊ ဇက်ကြောတက်၊ မျက်ရိုးကိုက်လာပါက လျှင်မြန်စွာ ပျောက်သည့် နည်း
ခေါင်းကိုက်။ နထင်ကိုက်။ ဇက်ကြောတက် မျက်ရိုးကိုက်။အလုပ်တစ်ဘက်နှင့်ဆေးခန်းသွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်လျှင် ချင်းတက်ကိုပါးပါးလှီးပြီးနထင်နှစ်ဘက်တွင်ကပ်ပေးပါ ။ ဇက်။ ဂုတ်ကျီးပေါင်းရှိသူများ။ ကျီးပေါင်းရင့်၍ မူးသူ ဇက် ကိုခဲဆွဲကုသနေရသူများသည် ဇက်ရင်းကျီးပေါင်းဖုပေါ်တွင် ချင်းကိုပါးပါးလှီးပြီး ၄-၅ နေရာကပ်နိုင်ပါသည် ။ ချင်းတွင်အပူဓာတ်ရှိသည်။ အရောင်ကျစေသောသတ္တိလည်းရှိသည်။ ပိုးကိုသေစေနိုင်သောသတ္တိလည်းထိုက်သင့်သလောက်ရှိပါသည်။ ချင်းသည်အပူဖြစ်သဖြင့် ကပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အာနိသင်ပြပါသည်။ တစ်နာရီခန့်ကပ်ထားပါ။များဆုံး အလွန်ဆုံး ၂နာရီထကာပို၍မကပ်သင့်ပါ။ တန်ဆေးလွန် ဘေးဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် ၁နာရီခန့်ကပ်ပေးနိုင်ပါသည် ။ zawgyi ေခါင္းကိုက္။ နထင္ကိုက္။ ဇက္ေၾကာတက္ မ်က္ရိုးကိုက္။အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင့္ေဆးခန္းသြားဖို႔အခ်ိန္မေပးနိုင္လွ်င္ ခ်င္းတက္ကိုပါးပါးလွီးၿပီးနထင္ႏွစ္ဘက္တြင္ကပ္ေပးပါ ။ ဇက္။ ဂုတ္က်ီးေပါင္းရွိသူမ်ား။ က်ီးေပါင္းရင့္၍ မူးသူ ဇက္ ကိုခဲဆြဲကုသေနရသူမ်ားသည္ ဇက္ရင္းက်ီးေပါင္းဖုေပၚတြင္ ခ်င္းကိုပါးပါးလွီးၿပီး ၄-၅ ေနရာကပ္နိုင္ပါသည္ ။ ခ်င္းတြင္အပူဓာတ္ရွိသည္။ အေရာင္က်ေစေသာသတၱိလည္းရွိသည္။ ပိုးကိုေသေစနိုင္ေသာသတၱိလည္းထိုက္သင့္သေလာက္ရွိပါသည္။ ခ်င္းသည္အပူျဖစ္သျဖင့္ ကပ္ၿပီး … Read more
အိုမိုင်ခရွန် ကိုဗစ်အသစ် စင်ကာပူမှာ ၂ ဦး စတွေ့နေပြီ…
အိုမိုင်ခရွန် ကိုဗစ်အသစ် စင်ကာပူမှာ ၂ ဦး စတွေ့နေပြီ။ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပထမဆုံး စတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ အာဖရိက Botswana မှာ စတွေ့တဲ့ အိုမီခရွန်က အာဆီယံကို ခြေချလာတဲ့ သဘောမှာ ရှိပါတယ်။ တွေ့တဲ့ ၂ ဦးက အာဖရိက ကနေ လေယာဉ်စီးလာတာဖြစ်ပြီး စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ်ကို transit အနေနဲ့ ခဏဝင်ကာ Australia ကို ဆက်လက် ထွက်ခွါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Transit အချိန်မှာ စင်ကာပူလေဆိပ်က ခရီးသည်တွေကို စစ်လိုက်ချိန် အိုမီခရွန် ၂ ယောက်တွေ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ပါလာတဲ့ ခရီသည်အများစုဟာ transit ဧရိယာ မှန်ခန်းထဲမှာပဲ ရှိနေကြပြီး ချန်ဂီ လေဆိပ်အတွင်း ဘယ်မှ မသွားခဲ့သလို စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းလည်း … Read more
ယနေ့မှာ အသက် (၄၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေး ကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသား ပြေတီဦး ယနေ့မှာ အသက် ၄၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရတ်မြတ်လေးကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်ကြီး ပြေတီဦး ထိမိ ပီပြင်တဲ့ သရု ပ်ဆောင်ချ က်များ နှင့် အပြုံးချို ချိုေ တွကြောင့် ပရိတ်သတ် ရင်ထဲနေရာ ယူထားတဲ့ အနုပ ညာရှင်တ စ်ဦးဖြစ်ပါ တယ်။ သူဟာ မြန်မာစာ လုံးပေါင်းနှ င့်ပတ်သက် ၍ ပညာပေး ရိုက်ကူး ထားတဲ့ မြန်မာ စာ မြန်မာစ ကား ရုပ်သံအစီအစဉ် မှာ သရုပ်ဆော င်တ စ်ဦးအနေနဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်း များကို စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ သူဖြစ်ပါ တယ်။ သူဟာ … Read more
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့တိုင်း အနားမှာ အတူရှိခွင့်ရနေတဲ့အတွက် ပြောပြလို့မရနိုင်အောင် ကြည်နူးနေရတဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ
သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာကတော့ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်အနွယ်ဝင် တစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ လုံးဝမပါဝင်ဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို အတော်လေး ရသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေကြပါစေ ဒါဒါကတော့ဝမ်းနည်းမနေဘဲ ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်း စိုးသူကိုလည်း အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ချစ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ စိုးသူရဲ့ (၅၆) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က စိုးမြတ်နန္ဒာရဲ့ Facebook Story တွင်ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့တိုင်း အနားမှာ အတူရှိခွင့်ရနေတဲ့အတွက် ပြောပြလို့မရနိုင်အောင် ကြည်နူးနေရတဲ့ ပုံလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ စိုးသူရဲ့မွေးနေ့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေ … Read more
ပွဲပြီးပေမယ့် မီးမသေနိုင်သေးဘဲ.. ရင်ထဲမှာ လောင်မြိုက်နေသမျှ.. ပေါက်ကွဲ ချလာကြပြန်တဲ့ အုပ်စိုးခန့်နဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ..
(Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်) ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ စည်သူဝင်းတို့ချစ်သူစုံတွဲနဲ့ သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းတို့ရဲ့ ပြဿနာကို ပရိသတ်ကြီးအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာပဲ ယွန်းယွန်းရဲ့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ အုပ်စိုးခန့်က ယွန်းယွန်းနဲ့လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့တာပဲ ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ My Day တွေ တင်ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ My Day ကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဘုန်းမင်းနေလကလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပြဿနာဖြစ်ချိန်မှ နင်းချတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကို ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာကမပြီးသေးပဲ အုပ်စိုးခန့်က သူ့ရဲ့ My Day မှာ “-ီး.. တော်တော်သိနေလား? ေ-ာက်ရူး ပါပြန်ပြီ” ဆိုပြီး တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အုပ်စိုးခန့်တင်တင်ပြီးချင်းမှာပဲ ဘုန်းမင်းနေလက “ကြောက်သေးပါနေပြီလား?၊ ငါေ-ာက်ကျင့်ယုတ်ရင် မင်းလုပ်စားလို့ပါမရပဲဖြစ်သွားမယ်။ ရှုတင်မှာသူများဖင်လိုက်ကိုင်တဲ့ကောင် ေ-ာက်ကျင့်ကအောက်တန်းကျလွန်းတယ်။ ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ ေ-ာက်ကလေးရာ” ဆိုပြီး ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းရဲ့ပြဿနာကြောင့် အုပ်စိုးခန့်နဲ့ … Read more
ဆောင်းမှာ နှုတ်ခမ်းတွေ ခြောက်ရင် ဒါလုပ်ကြည့်
ရာသီအကူးအပြောင်းကာလမှာ နှုတ်ခမ်းသားအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အစိုဓာတ်တော်တော်များများ ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ဒီအခါမှာ နှုတ်ခမ်းက ခြောက်သွေ့လာတယ်။ အရောင်မှိန်လာတယ်။ အသားပပ်ပြီး နူးညံ့မှုမရှိတော့ပဲ မာကြမ်းကြမ်းဖြစ်ပြီး ကွဲအက်လာပါတယ်။ မကြာခဏ နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့ လျက်တတ်တဲ့သူတွေ၊ နှုတ်ခမ်းကိုက်တတ်သူတွေ၊ နှုတ်ခမ်းအပေါ်ယံ အရေပြားကို အမြဲတမ်းဖဲ့နေတတ်သူတွေ၊ ရေသောက်နည်းသူတွေ၊ အစာအာဟာရမမျှတသူတွေမှာ နှုတ်ခမ်းကွဲတာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီတော့ အလှပြင်ဖို့ အချိန်သိပ်မပေးလိုတဲ့ အမျိုးသားတွေ၊ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ အလွယ်တကူ နှုတ်ခမ်းသားပြုပြင်လို့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေနဲ့ အသုံးဝင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ အောလ်မွန်စေ့အဆီ အသားအရေနဲ့ ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ အော်လ်မွန်စေ့ကရတဲ့ အဆီအနှစ်တွေဟာ အရေပြားကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပြီး အေးမြစေလို့ ဆောင်းရာသီလို နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့ကွဲအက်တဲ့ ရာသီဥတုအတွက်ဆိုရင်တော့ သုံးလို့ အလွန်သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် … Read more
ကြားရသူတိုင်း မျက်ရည်ကျစေတဲ့ ချစ်သုဝေ ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး
ကြားရသူတိုင်း မျက်ရည်ကျစေတဲ့ ချစ်သုဝေ ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါ ရှိပါသည် … ချစ်သုဝေ ကတော့ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက အဆိုတော်လုပ်ရင်း မြန်မာဇာတ်လမ်း တွေမှာလည်း ကျရာ နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ခံခဲ့ရသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ အိမ်ထောင် ကျပြီးလို့ ခေတ်ခေတ်နဲ့သစ်သစ် လို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။သာယာပျော်ရွင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးမှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအပြင် ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ထားပြီး ခွဲစိပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်း ကုသိုလ်ယူရင်း ရောဂါကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သုဝေ ဟာ လက်ရှိမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆို အရေးယူခံ ထားရတာကြောင့် ဘေးကင်းရာသို့ တိမ်းရှောင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ … Read more
ယနေ့အချိန် အထိ ရွာမှာ အလှူရှိတိုင်း ရွာလုံးကျွတ် ထမင်း တစ်အိုးစီ တာဝန်ယူတဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိတဲ့ရွာေလး
ယနေ့အချိန် အထိ ရွာမှာ အလှူရှိတိုင်း ရွာရှိအိမ်တိုင်းက ထမင်း တစ်အိုးစီ တာဝန်ယူတဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိတဲ့ရွာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အလှူဆိုရင် လက်မနှေး တတ်တာမို့ ဘယ်တော့မှ သဒ္ဒါတရား မနည်းဘူး ဆိုတာ ကမ္ဘာက သိပါတယ်နော်။ အခုလည်း မြန်မာပြည် စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက ရွာလေးတစ်ရွာရဲ့ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ညီညွတ်မှုကို ပြသနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ရပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ် မြေလင်း စံပြ ကျေးရွာလေးဟာ ဆိုရင် သူတို့ ရွာက အလှူ အတွက် ယနေ့ အချိန်အထိ တအိမ်ကို တအိုး ထမင်းပေါင်း ပေးနေတာမို့ ညီညွတ်တဲ့ ရွာဓလေ့လေးကို လေးစားသောအားဖြင့် ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ယနေ့အချိန် အထိ … Read more
ထိုင္းထီဘတ္ (၁၂) သန္းေပါက္တဲ့ ျမန္မာဇနီးေမာင္ႏွံက ဘတ္(၁) သန္းကို လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာလႉတန္း
ထိုင္းထီဘတ္ (၁၂) သန္းေပါက္တဲ့ ျမန္မာဇနီးေမာင္ႏွံက ဘတ္(၁) သန္းကို လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာလႉတန္း ထိုင္းထီႏွစ္ေစာင္တြဲ ထိုင္းဘတ္ေငြ(12)သန္း ကံထူးရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံက ဘတ္(11)သန္းကိုျမန္မာျပည္ပို႔ၿပီး က်န္ေငြ( 1 )သန္းကို ေနရာစုံလိုက္လႉသြားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကိုေ လးစားလို႔ ဒီပိုစ့္ေလးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။ မဟာခ်ိဳင္ဝပ္ထစ္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီပုံတူ တည္ေနေသာ ေနရာသို႔ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား AAC ေဂဟာတြင္ခိုလႈံေနေသာ အခက္အခဲရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား အလႉ လခမရေသာ AAC အမာခံအဖြဲ႕သားမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း။ ေျခလက္မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သုံးစြဲရန္လႉေပးျခင္ းAAC ေဂဟာရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအားေထာက္ပံျခင္း AAC ေဂဟာရွိ ခင္ပြန္းေသဆုံးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းေထာက္ပံ့ေရး အတြက္ဆန္ဆီေခါက္ဆြဲ ငါး ေသတၱာဗူးမ်ားAAC ႐ုံးရွိ အခက္အခဲရွိလုပ္သားမ်ားအတြက္ထိုင္ဘတ္ေငြ (100000) ဘတ္ျမန္မာျပည္မွာ အမႈမ်ားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနသည့္ AAC ဦးေဆာင္သူ … Read more